Kilasy kely APT —— Famakafakana momba ny toetran'ny rafitra WDM sy ny Application Market-News-Qingdao dia nampihatra teknolojia fotonic co., Ltd
Kilasy kely APT —— Famakafakana momba ny toetran'ny rafitra WDM sy ny fampiharana ny tsena
Views:65 Fotoana famoahana: 2020-08-25
1.mampiasà feno ny loharanom-pitaovana bandwidth an'ny fibre optique. Fiber dia manana loharanom-pitaovana goavana (bandy fatiantoka ambany). Ny teknolojia fampitomboana ny halavan'ny halavan'ny onjam-peo dia mampitombo ny fahafahan'ny transmite fibre im-betsaka hatramin'ny am-polony na in-jato mihitsy aza noho ny iray halavan'ny halavany, ka mampitombo ny fahafahan'ny transmite sy mampihena ny vidiny. Manana sanda fampiharana sy sanda ara-toekarena lehibe izy io.
2. fampitana mangarahara famantarana. Satria ny rafitra WDM dia mihamahazo volo sy mitambesatra arakaraka ny halavan'ny halavan'ny hazavana, tsy misy ifandraisany amin'ny tahan'ny famantarana sy ny maodely fanodinana herinaratra izany hoe "mangarahara" amin'ny angon-drakitra. Vokatr'izany dia azo ampitaina ireo fambara misy toetra samy hafa tanteraka, toy ny ATM 、 SDH 、 IP sy ny fifangaroan'ny serivisy marobe (audio, video, data, sns.), Sns.
3. fanitarana sy fanavaozana dia tsotra sy mety, vidiny ambany. Mety ny manitatra ny fahaizan'ny rafitra fifandraisana amin'ny fibre optika amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia multiplexer fizarana halavan'ny halavany. Amin'ny dingan'ny fanitarana sy ny fampandrosoana ny tamba-jotra dia tsy ilaina ny manova ny tsipika tariby optika, fa ny manolo ny transmiter optika sy ny mpandray optika, izay fomba fanitarana mety indrindra. Mandehana mankany amin'ny tranokalan'ny orinasa raha mila fampahalalana ara-teknika: www.guangying.com /www.qdapt.com.